Akan Kaseɛbɔ: GHAMRO Kuo kyerɛsɛ Rex Oman mfa n'akonwan nto hɔ > News Times GH
Akan Kaseɛbɔ: GHAMRO Kuo kyerɛsɛ Rex Oman mfa n’akonwan nto hɔ
Asante mantam GHAMRO mpaninfoɔ
Adwomtofoɔ ɛwɔ Asante mantam a wɔ dɔm ekuo a wɔfrɛ ‘Ghana Music Rights Organization’ a wɔtwa no tia sɛ, GHAMRO no kyerɛmu sɛ, Owura Rex Oman a wɔyɛ wɔn anodifoɔ (President) no ɛmfa n’akonwa ɛnto hɔ, ɛsane ne nhyehyeɛ bɔne ne sika die basabasa nti.
Adwomtofoɔ yi de nsɛm yi too dwa wɔ aberɛ a wɔne nsɛmtwerɛfoɔ dii nhyeamuu wɔ Kumasi Amammerɛ fie(cultural center)
Wɔkyerɛɛ mu kyerɛɛ Newstimesgh.com Akan Kaseɛbɔ sɛ, Owua Rex Oman afa kwati kwan so adi wɔn sika (royalties) a nka ɛwɔ sɛ wɔn nsa ka.
Adwomtofoɔ no kyerɛ mu sɛ ɛfiri abere a Rex Oman bɛtenaa akonwa no soɔ no, sika titiri a wɔn nom bi nsa taaka paa yɛ Ghana sika GHC50 kɔpem GHC150.
Nkrofokuo yi kyerɛ mu biom sɛ abere a na Rex Oman ɛnya mmaeɛ no na wɔn nsa tumi sika a ɛsombo bɛyɛ GHC1,500 ne akyire, dea w’anya koraa nono.
Nanso ɛfrisɛ Owura no bɛtenaa GHAMRO akonwa no so no noɔma asesa koraa ama fom ara na Rex Oman refom wɔn sika no. Wei de ɔhaw ne ahokyerɛ kɛseɛ paa na aba wɔn so.
Ne sɛe nti, nkrɔfokuo yi a Owura Piesie Sarfo, Nana Tabiri ne mpaninfoɔ ahodoɔ di wɔn anim no kyerɛsɛ, wɔn nom ma Rex Oman abosomee mienu sɛ ɔntu ne ho adeɛ so, na sɛ amma saa wɔn nom bɛ yɛ ɔyɛkyerɛ kɛseɛ paa de wɔn pɛ atu no ɛfiri akonwa no so.
Ɛwɔ GHAMRO nhyehyeɛ mu sɛ abosome nsia biara, ɔwɔ sɛ ɔdwomto nii biara nsa ka ne dwomtoɔ ho sika(royalties)
Na ɛno na adwomtofoɔ yi kyerɛsɛ sika a Rex Oman de ma wɔn no sua koraa ne saa nti no, wɔn nom susu sɛ Owura Rex Oman de akonwa no to hɔ a, ɛboboa ama GHAMRO afa ne ntomapa afra na ɛbɛboa ama adwomtofoɔ yiedie nso akɔ nkan.
Ɔtwerɛfoɔ: Bonodehyeɛ Piesie Kwabena Marfo